Sawirro+Warbixin-Qarixii lala beegsaday hotelka Syl ee Magaalada Muqdisho. – Radio Daljir
Agoosto 30, 2016 5:37 b 0
Muqdisho, Aug 30 2016–Waxaa Duhurnimadii maanta qarax aad u xoogan oo ismiidaami ah uu ka dhacay albaabka laga galo xarunta Madaxtooyada Soomaaliya sidoo kale dhabarka ku haya Hotelka SYL ee Magaalada Muqdisho.
Qaraxa ayaa ahaa gaari nuuca xamuulka qaado oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay, waxaana gaariga la sheegay in uu xoog kusoo dhaafay koontaroolo ay joogeen ciidanka dowlada kadibna ku uu qarxay meel ku dhaw Hotelka SYL oo kuyaala albaabka laga galo Villa Soomaaliya.
Gaariga ayaa la sheegay in uu xoog kusoo dhaafay Igooska Sayidka halkasa ay joogeen ciidamo katirsan Dowlada, waxaana gaariga oo rasaas lagu furayo ugu dambeyn ku qarxay dhabarka dambe ee Hotelka SYL oo kuyaala albaabka laga galo xarunta Villa Soomaaliya .
Qaraxa kadib ayaa la maqlay rasaas xoogan ay furayeen ciidamada dowlada, waxaana gabi ahaan la xiray wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa aaga ay qaraxyadu ka dhaceen, waxaana xaalada magaalada ay noqotay mid jahwareer badan uu ka jiro.
Dad badan oon tiradooda la ogeyn ayaa qaraxyadan ku dhintay, waxaa sidoo kale gaadiidka ampalaasta ay qaadeen dhaawacyo badan oo isugu jira dad shacab ah iyo ciidamo katirsan Dowlada oo waxyeelo kasoo gaartay qaraxa.